Whitney Houston anwuola - Igbo News | News in Igbo Language
Nov 15, 2011 - 00:04 Updated: Jan 20, 2021 - 00:04
Otu nwanyị olu ọma, onye Amerịka, a ma ama maka ịgụ egwu, bụ Whitney Houston, anwụọla. E butere ozu Whitney n’ime ụlọ oriri n’ọñụñụ Beverly Hilton.
A ma Whitney ama maka olu ọma ya. Ọ gbara afọ 48 tupu ọnwụ egbuo ya. Tupu ọ nwụọ, ọ gara na mpaghara Hollywood ebe a na-eme mmemme nturu ugo Grammy. Grammy bụ otu n’ime mmemme ndị a na-eji etuwe ndị aka ha pụtara ihe n’ịkụ egwu ugo.
A na-ekwu na a hụrụ Whiteney anya ịkpazụ n’ụbọchị Tọzdee mgbe ọ gụchara nwa obere egwu n’ebe ahụ a na-eme mmemme Grammy. A hụkwara ya anya ọzọ na mgbede Fraịdee ebe ya na ndị enyi ya na-enwe añụrị n’ụlọ oriri n’ọñụñụ Beverly Hilton.
Gọọmenti Canada ga-enye ndịda-anyanwụ Afrịka ọgwụ mgbochi...
Chidi Igwe Aug 15, 2014 0